Ụbọchị My Pet » Olee otú mbara ala nwere ike ikwu gị Ịhụnanya gị Akara Aka
emelitere ikpeazụ: Feb. 15 2020 | 3 min agụ
Na ịgụ kpakpando, e nwere ihe a na-akpọ a Natal chaatị. Ọ bụ isi a snapshot nke kpọmkwem ebe ke Zodiac nile nke mbara ala na ndị ọzọ na n'eluigwe na ndị na oge nke mụrụ gị si ebe a mụrụ gị. Ọ bụ dị ka a map, ayak àgwà gị na-egosi ihe ị chọrọ / mkpa akụkụ dị iche iche nke ndụ gị. Onye ọ bụla maara na Venus bụ planet nke ịhụnanya, na ihe ịrịba ama ọ na-emi odude ke na mụrụ gị nwere ike inye ghọta ihe dị gị mkpa ịhụnanya. Gịnị ka otú i Venus-ekwu banyere gị? (Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ gị Venus ịrịba ama, pịa ebe a).
Venus na Aries: Ị mkpa onye pụrụ ijide gị mmasị, ma ọ bụ ị na-akpali na ngwa ngwa. Ha kwesịrị dakọtara gị ahuhu, na-anụ ọkụ n'obi banyere ndụ. Ị nwere ike na-adọta ọtụtụ nwere ịchọ ịlụ gị ịbịa, ma ị na-aga site na ha ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị na-agaghị lekwasịrị anya ihe ị chọrọ. Ị ga-esi gafee oké mkpa ka mgbe niile nwere na ika-ọhụrụ mmetụta.
Venus na Taurus: Ị mkpa onye kwụsiri ike ma na ọrụ. Ọ bụrụ na ha na-na na anụ ọhịa na-abaghị uru, na ị na-agba ọsọ ahụ ụzọ ọzọ. Ị ga-amasị onye na-emebi gị a obere na finer ihe ná ndụ, na onye nwere ike dakọtara gị anụ ọdịdị. Ị na-ewe gị oge mgbe ị na-ahọrọ onye, na ikwu ngụkọta nkwa. Watch n'ihi ịbụ kwa possessive ma ọ bụ na-ekwo ekworo.
Venus na Gemini: Ị mkpa iche echiche mkpali karịa ihe niile ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara inwe ezigbo mkparịta ụka na onye, ị ga na-awagharị. Ị mkpa onye bụ na-akpali, ihe nwere ọgụgụ isi ụdị, ma onye na-ọzọ ebe karịa gị otú ha nwere ike ruo gị na corral ị. I nwere ike na-aga n'ihi na onye tọrọ onwe gị, ma ọ bụ ndị na-eme obere karịa ha na-.
Venus na Cancer: Ị mkpa mmetụta uche njikọ na onye karịa ihe niile ọzọ. Ị chọrọ onye na-pụrụ imeghe gị n'ụzọ mmetụta uche, na-akwado ma na-agba gị, ma ga-inupụ gị n'èzí gị nkasi obi mpaghara. Mmekọrịta nwere ike inwe dull ọ bụrụ na ị na-ụfọdụ ize onye gị ọ bụla mere mgbe. Watch maka ọchịchọ gị ka ị na-nne na nna na mmekọrịta.
Venus na Leo: Ị mkpa ịdị na kpakpando na mmekọrịta, otú ị chọrọ onye na-ga-enye gị ntị ma na-eto gị mkpa. I nwere ike ịbụ a obere ọdịmma onwe onye nanị mgbe ụfọdụ na ịhụnanya, ma ị ma na-ekpo ọkụ na omiiko nakwa, na ihe ijuanya na-eguzosi ike n'ihe. Ị ga-amasị ịhụnanya na-dị ka ihe si na ọkacha mmasị gị romance akwụkwọ ma ọ bụ ihe nkiri, na dị nnọọ ihunanya.
Venus na Virgo: Ị mkpa onye bara uru na ọrụ, na onye ga-ekwe ka ị na-oge gị. Ị na-achọghị ọsọ mgbe ị na-ahọrọ onye na-na, na chọrọ ijide n'aka na ọ bụ nri mbụ. I nwere ike ịbụ a obere na-eme ihere na ịhụnanya, na ike mkpa ha ka ha ụzọ mee ihe. Ị mkpa a onye ndị nwere ike ịfụ gị iwe mgbe ị na-echegbu onwe banyere mmekọrịta.
Venus na Libra: Ị mkpa onye na-ewe nkwa kpọrọ, n'ihi na ị n'aka-eme. N'otu oge ahụ, mkpa ka i nwere ihe ụfọdụ na ego nke uwa na a mmekọrịta na-eto eto, na ị chọrọ onye na-aghọta na mmekọrịta nwere ike mgbe niile-esi ka mma. Ị ghọta romance na chivalry, ma na-achọ ka e si mesoo nkwanye ùgwù na dị ka ihe hara.
Venus na Scorpio: Ị mkpa onye bụ omiiko ma onye nwere ike ijikwa gị ike, n'ihi na ị pụrụ isi ike mgbe ụfọdụ na ịhụnanya. Ị nwere ike belata ma ọ bụ jidesienụ onye gị na, eme ihe na-achịkwa ma ọ bụ megharịa ha, n'ihi ya, ọ bụ ihe dị mkpa ka ị na-arụ ọrụ na tupu ịbụ na mmadụ ma ọ bụ ị ga-inupụ ha. Ị na-dọtara ike ndị yiri ike.
Venus na Sagittarius: Ị mkpa onye na adventurous, obi ike, na ike na-achị ọchị na gị. Ị adịghị ịhụnanya kwa kpọrọ, otú ị chọrọ onye bụ ihe bara uru na ịhụnanya, ga-ekwe ka ị kpafuo ukwuu. Ị mkpa a anụ ahụ na njikọ na onye, na kwesịrị icheta onye obi na otu onye bụ mkpa kwa. Nke a na ọnọdụ nwere ike igosi na ebighị ebi okokporo / bachelorette.
Venus na nhiwe Capricorn: Ị mkpa onye tozuru okè, ọrụ, na a bit omenala na ịhụnanya. Ị na-dọtara ndị na-aga nke ọma, enweta ma ọ bụ na ha na ọbọ a elu ọnọdụ ná ndụ, ma ị nwere ike na-aga n'ihi okenye mmekọ. Ebe ọ bụ na ị na-na na na otú omenala, ị pụrụ iji onye ga-eweta ụfọdụ ose otú ahụ mmekọrịta na-adịghị stale.
Venus na Aquarius: Ị mkpa onye na ha onwe ha onye, nwere a pụrụ iche mmadụ, na ọkụ ị ọgụgụisi. -Amasị gị ịbụ enyi na onye mbụ, na-eche na enyi bụ zuru okè ntọala maka ịhụnanya. Ihe bụ nsogbu bụ, ị nwere ike nwere ike oge na-aga karịrị enyi, otú ị chọrọ onye ga-emeghe gị n'ụzọ mmetụta uche na-eme ka agụụ mmekọahụ.
Venus na Pisces: Ị mkpa onye na-aghọta gị mkpa mmetụta uche, ga-echebe gị mgbe ị na-eche na-adịghị ike, na-agaghị na-uru nke ị. Ị ga-eme ihe ọ bụla n'ihi na onye ị hụrụ n'anya, ike mfe mma n'ihi na. Ndị dị otú ahụ a ihunanya obi, gị mkpa onye bara uru na ebe. Ị na-dọtara nka ụdị.